Nehemaya 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
3 Elayashib+ nnukwu onye nchụàjà na ụmụnne ya, bụ́ ndị nchụàjà, wee bilie rụọ Ọnụ Ụzọ Ámá Atụrụ.+ Ọ bụ ha doro ya nsọ+ ma tinye ibo ụzọ ya niile; ha dokwara ya nsọ ruo Ụlọ Elu Mia,+ ruo Ụlọ Elu Hananel.+ 2 Ndị Jeriko+ rụzikwara mgbidi n’akụkụ ha. Zakọ nwa Imraị rụzikwara mgbidi n’akụkụ ha. 3 Ọ bụ ụmụ Hasenea rụrụ Ọnụ Ụzọ Ámá Azụ̀;+ ọ bụ ha jikwa osisi wuo ya+ ma tinye ibo ya,+ ihe mkpọchi ya na ihe ntụchi ya.+ 4 Meremọt+ nwa Yuraịja+ nwa Hakọz rụziri mgbidi n’akụkụ ha, Meshọlam+ nwa Berekaya nwa Meshezabel rụzikwara mgbidi n’akụkụ ha; Zedọk nwa Beana rụziri mgbidi n’akụkụ ha. 5 Ndị Tekoa+ rụzikwara mgbidi n’akụkụ ha; ma ndị ukwu+ ha ewedaghị onwe ha ala ịrụ ọrụ ndị nna ha ukwu. 6 Ọ bụ Ọnụ Ụzọ Ámá Obodo Ochie+ ahụ ka Joyada nwa Pasia na Meshọlam nwa Besodaya rụziri; ọ bụ ha ji osisi rụọ ya, tinyekwa ibo ya na ihe mkpọchi ya na ihe ntụchi ya.+ 7 Melataya onye Gibiọn+ na Jedọn onye Merọnọt+ rụziri mgbidi n’akụkụ ha, ha bụ ndị Gibiọn+ na ndị Mizpa,+ bụ́ ndị nọ n’okpuru ọchịchị gọvanọ+ nke na-achị ofe Osimiri Yufretis.+ 8 Ọziel nwa Hahaya, otu n’ime ndị na-eji ọlaedo akpụ ihe,+ rụziri mgbidi n’akụkụ ya; Hananaya, onye so ná ndị na-esi mmanụ otite,+ rụziri mgbidi n’akụkụ ya; ha wee doo mbadamba nkume n’ụzọ Jeruselem ruo Mgbidi Sara Mbara.+ 9 Refeya nwa Họọ, onyeisi ọkara ógbè Jeruselem, rụziri mgbidi n’akụkụ ha. 10 Jedeya nwa Harumaf rụziri mgbidi n’akụkụ ha n’ihu ụlọ ya;+ Hatọsh nwa Hashabnaya rụziri mgbidi n’akụkụ ya. 11 Ọ bụ mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀ ka Malkaịja nwa Herim+ na Hashọb nwa Pehat-moab+ rụziri, tinyere Ụlọ Elu nke Ekwú Ighe Ihe.+ 12 Shalọm nwa Halohesh, onyeisi+ ọkara ógbè Jeruselem, rụziri mgbidi n’akụkụ ya, ya na ụmụ ya ndị inyom. 13 Ọ bụ Henọn na ndị bi na Zanoa+ rụziri Ọnụ Ụzọ Ámá Ndagwurugwu;+ ọ bụ ha rụrụ ya ma tinye ibo ya,+ ihe mkpọchi ya+ na ihe ntụchi ya,+ ha rụkwara otu puku kubit ná mgbidi ya ruo Ọnụ Ụzọ Ámá Ikpo Ntụ.+ 14 Ọ bụkwa Malkaịja nwa Rikab, onyeisi ógbè Bet-hakirem,+ rụziri Ọnụ Ụzọ Ámá Ikpo Ntụ; ọ bụ ya rụrụ ya ma tinye ibo ya, ihe mkpọchi ya na ihe ntụchi ya. 15 Ọ bụ Shalọn nwa Kọlhoze, bụ́ onyeisi ógbè Mizpa,+ rụziri Ọnụ Ụzọ Ámá Iyi;+ ọ bụ ya rụrụ ya, kụchie elu ya ma tinye ibo ya,+ ihe mkpọchi ya na ihe ntụchi ya, ọ rụkwara mgbidi Ọdọ Mmiri+ nke Ọwa Mmiri ruo n’Ubi Eze,+ ruo n’Ebe Nrịgo+ nke si n’Obodo Devid+ gbadaa. 16 Onye na-eso ya bụ Nehemaya nwa Azbọk, onyeisi ọkara ógbè Bet-zọọ.+ Ọ rụziri mgbidi ruo n’ihu Ebe E Liri Devid,+ ruo n’ọdọ mmiri+ a rụrụ arụ, ruokwa n’Ụlọ Ndị Dike.+ 17 Ndị na-eso ya bụ ndị Livaị,+ bụ́ ndị nọ n’okpuru Rihọm nwa Benaị.+ Ha rụziri mgbidi; n’akụkụ ha, Hashabaya, onyeisi ọkara ógbè Kaịla,+ rụziri ebe e kenyere ógbè ya. 18 Ndị na-eso ya bụ ụmụnne ha ndị nọ n’okpuru Bavaị nwa Henadad, onyeisi ọkara ógbè Kaịla. Ha rụziri mgbidi. 19 Iza nwa Jeshụa,+ onyeisi Mizpa,+ wee rụzie mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀ n’akụkụ ya n’ihu ebe a na-esi agbago Ụlọ Ngwá Agha nke dị na Nkuku Mgbidi.+ 20 Onye na-eso ya bụ Barọk nwa Zabaị.+ O ji ịnụ ọkụ n’obi+ rụọ ọrụ wee rụzie mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀, malite na Nkuku Mgbidi ruo n’ọnụ ụzọ ụlọ Elayashib+ nnukwu onye nchụàjà. 21 Onye na-eso ya bụ Meremọt nwa Yuraịja+ nwa Hakọz. Ọ rụziri mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀, malite n’ọnụ ụzọ ụlọ Elayashib ruo na nsọtụ ụlọ Elayashib. 22 Ndị na-eso ya bụ ndị nchụàjà, bụ́ ndị ikom Ógbè Jọdan.+ Ha rụziri mgbidi. 23 Ndị na-eso ha bụ Benjamin na Hashọb. Ha rụziri mgbidi n’ihu ụlọ ha. Onye na-eso ha bụ Azaraya nwa Measaya nwa Ananaya. Ọ rụziri mgbidi n’akụkụ ụlọ ya. 24 Onye na-eso ya bụ Binuai nwa Henadad. Ọ rụziri mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀, malite n’ụlọ Azaraya ruo na Nkuku Mgbidi,+ ruokwa na nkuku ụzọ. 25 Onye na-eso ya bụ Pelal nwa Yuzaị. Ọ rụrụ ọrụ n’ihu Nkuku Mgbidi na ụlọ elu nke sepụtara isi n’Ụlọ Eze,+ nke dị ná mgbago n’Ogige Ndị Nche.+ Onye na-eso ya bụ Pedaya nwa Perọsh.+ 26 Ọ bụ ndị Netinim+ bi n’Ofel;+ ha rụziri mgbidi ruo n’ihu Ọnụ Ụzọ Ámá Mmiri+ nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, ruokwa n’ụlọ elu nke sepụtara isi. 27 Ndị na-eso ha bụ ndị Tekoa.+ Ha rụziri mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀, malite n’ihu nnukwu ụlọ elu ahụ nke sepụtara isi ruo na mgbidi Ofel. 28 Ndị nchụàjà rụziri mgbidi n’elu Ọnụ Ụzọ Ámá Ịnyịnya,+ onye ọ bụla n’ihu ụlọ ya. 29 Onye na-eso ha bụ Zedọk+ nwa Ịma. Ọ rụziri mgbidi n’ihu ụlọ ya. Onye na-eso ya bụ Shemaya nwa Shekanaya, onye na-eche Ọnụ Ụzọ Ámá dị n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ+ nche. Ọ rụziri mgbidi. 30 Ndị na-eso ya bụ Hananaya nwa Shelemaya na Henọn nwa nke isii Zelaf. Ha rụziri mpaghara ọzọ a tụrụ atụ̀. Onye na-eso ha bụ Meshọlam+ nwa Berekaya. Ọ rụziri mgbidi n’ihu ụlọ nke ya.+ 31 Onye na-eso ya bụ Malkaịja, onye so n’òtù ndị na-eji ọlaedo akpụ ihe.+ Ọ rụziri mgbidi ruo n’ụlọ ndị Netinim+ na ndị ahịa,+ n’ihu Ọnụ Ụzọ Ámá Nnyocha, ruokwa n’ọnụ ụlọ dị n’elu nkuku mgbidi. 32 Ndị na-eji ọlaedo akpụ ihe na ndị ahịa rụzikwara mgbidi n’agbata ọnụ ụlọ dị n’elu nkuku mgbidi na Ọnụ Ụzọ Ámá Atụrụ.+